aluminialy mitsonika famonosana lafaoro indrafo any Sina
Ny ambony indrindra 200 ^ 2000kg aluminiara fandrafetana lafaoro vovo-dronono ho an'ny fanariana sy ny menaka mikororoka alumina, ingot, lakandrano ary fitaovana maloto.
Ny alim-bary fanodinana alika Aluminio dia hametraka ny alim-bary na ala / ala ho toy ny lozam-pifamoivoizana amin'ny alim-pitamboaran-jiro fanodinana alimina ary manomboka ny lafaoro hanomboka ny dingan-dava. Fanampiana alim-bika maro kokoa ity dingana ity dia azo raisina satria aluminium ny alika mivadika kokoa ny hafanana.
Atombony azo avy amin'ny lafaoro miteraka vovo-dronono:
Ny famokarana indostrian'ny elektromagnetika miaraka amin'ny fampandrosoana sy ny fahamatoran'ny teknôlôjia, ny fizotry ny famokarana sy ny teknôlôjia, ny rindrambaiko, toy ny fiarovana azo antoka ny hery ankehitriny, dia 2-300KW.
Fampanjonoana ireo andian-tsolika elektrika vita amin'ny SMJD elektrika vita amin'ny fatana fanalefahana:
Sokajy Technologies Tags Lafaoro fandrefesana vita amin'ny alumina, mihena ny aluminiera mitsonika, lafaoro fandrefesana aluminium, milina fanoratana mtafika aluminium, aluminiana mikorontana, fandrefesana lafaoro vita amin'ny alumina Post Fikarohana